फुलन्देकी आमाका रूपमा ‘हिट’ भएका पुरुष को हुन ? – NepalajaMedia
March 7, 2021 270
काठमाडौँ । दर्शकका नजरमा उनी महिला हुन्। उनलाई धेरैले आमाका रूपमा चिन्छन्, फुलन्देकी आमा। वास्तविक जीवनमा उनी पुरुष हुन्।पर्दाभित्रकी फुलन्देकी आमाको बाहिरी नाम उमेश राई हो। फुलन्देकी आमा ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ को एक पात्र हो। कार्यक्रममा लिम्बू समुदायको विशेष पहिरनमा सजिने फुलन्देकी आमाले अतिथि र दर्शकसँग गर्ने अनौपचारिक कुराकानी निकै रुचाइएको छ।
Prev६ महिने शिशुको मृत्यु घटना थप रहस्यम: खा ल्डो ख’न्ने ब्यक्ति मिडियामा आएर खुलाए सबैकुरा, जडिबुटी भनेर बि ष खु’वा इयो !(भिडियो हेर्नुस्)
Nextआज पनि पत्याउनै नसकिने गरी ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुदैँछ कारोबार ?